War Deg-deg ah :- Maamulada Sadaxda gobol iyo lixda gobol Koofur galbeed oo la sheegay in la heshiisiiyey. - iftineducation.com
War Deg-deg ah :- Maamulada Sadaxda gobol iyo lixda gobol Koofur galbeed oo la sheegay in la heshiisiiyey.
iftineducation.com – Warar ay Okesom ee magaalada Baydhabo ee xarunta G/Bay ayaa sheegaya in ay caawa magaaladaasi lagu soo gaba-gabeeyey qorshe lagu heshiisiinayo xubno kala kala socday labada maamul ee ku sugan magaalada baydhabo ee xarunta G/Bay.
Malaaq Macalin Cali Barre oo kamid ahaa malaaqyada Qorshahaasi qeybta ka ahaa oo wareysi gaar ah siinaye Idaacaddaha Magaalada Muqdisho ayaa sheegay in xubnihii madoobe nuunoow ee lexda gobol ay goobtaasi ku sugnaayeen.
Xiriiro aynu la sameyno xubnaha lexda gobol ee uu hogaamiye madoobe Nuunoow nooma suurta galin in ay ka jawaabaan wicitaankeena.
Madaxweynaha Somaliya oo sheegay in Cumar C/rashiid uu ku soo doortay aqoon iyo waayo aragnimo (Daawo Sawirada)